कफी कत्तिको मन पर्छ? एक डाक्टरले कफीको दानासँगै साङ्ला पनि पिसिने यस्तो दिए जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्) – Ramailo Sandesh
कफी कत्तिको मन पर्छ? एक डाक्टरले कफीको दानासँगै साङ्ला पनि पिसिने यस्तो दिए जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्)
मानिसको दैनिकीसँग कफी जोडिएको छ । कतिलाई त कफी नपिइकन दिनको सुरुवात नै भएजस्तो लाग्दैन । तर यहाँ एक अलि दुःखको खबर बाहिरिएको छ । सूचनामुलक भिडियोमार्फत टिकटकमा लाखौं दर्शक बनाउन सफल डा करण राजले पहिले नै पिसिएको कफी प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएका छन् ।
करिब १५ लाखभन्दा बढी दर्शकले हेरिसकेको भिडियो क्लिपमा उनले पिनिएको कफीमा कफीसँगै पिनिएको साङलोको अवशेष हुन सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, – ‘तपाईंले अधिकांश स्टोरहरूबाट किन्ने धुलो कफीमा साङ्लो पनि मिसिएको हुन सक्छ । किनभने कफीको दानामा साङ्लो र अन्य किरा फटेंग्रा लाग्ने गर्दछन् । प्रायशः तिनीहरूलाई राम्ररी केलाइँदैनन् । र कफीको दाना सँगसँगै तिनीहरू पनि पिसिन्छन् ।
अधिकांश खाद्यान्न निकायहरूले समेत हाम्रो खानामा केही निश्चित प्रतिशत किराको अवशेषलाई अनुमति प्रदान गर्ने गरेका छन् ।’ यसैगरी, उनले यस्तो कफीको पनि अलिकति समर्थन गर्दै भनेका छन्, – ‘साङलोमा निकै प्रोटिन हुन्छ । तर, तपाईंलाई साङलोको एलर्जी छ भने पिनेको कफीबाट टाढै रहनुहोस् । सन् २००९ मा अमेरिकामा त्रुटिवश कफीमा १० प्रतिशतसम्म साङ्लोलगायत अन्य किरा मिसिए पनि छुट दिने नीति लिइएको थियो ।’ उनको यस विवादास्पद भिडियोमा दर्शकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिलेको आधुनिक जमानामा आर्थिक दृष्टिकोणले अलि हुनेखाने माझ चियाभन्दा कफी पिउने र पिलाउने प्रचलन शानदार शौखको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ ।
कन्चन र अनिशाको बिहेको फोटो खिच्ने दाई संग भेटियो यस्तो प्रमाण (भिडियो
निरुता र विपना नेफ्टा अवार्डका लागि नेपाल